गुणस्तरमा अभिभावकको विश्वास – News Portal
गुणस्तरमा अभिभावकको विश्वास
April 30, 2019 epradeshLeaveaComment on गुणस्तरमा अभिभावकको विश्वास
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले शैक्षिक सत्रलाई विशेष रुपमा लिने गर्दछन् । आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई अब्वल बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यालयको सुधारको योजनाको बारेमा माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर, दाङका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेल सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप । – सम्पादक
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ, तपाईहरुको योजना के छ ?
भर्ना अभियान शुरु गरियो । आवश्यकता अनुसारको विद्यार्थी संख्या पुगिसक्यो । पठनपाठन शुरु भएको छ । यस वर्षदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ शुरु गरिएको छ ।
प्रति ५० विद्यार्थी एक सेक्सनका आधारमा प्रायः सबै कक्षाहरुमा ३–४ वटासम्म सेक्सनको व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक जनशक्ति एवं भौतिक व्यवस्थापन गरिएको छ । व्यवस्थित एवं प्रभावकारी शिक्षणको माध्यमबाट उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ ।
विद्यालयलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ ?
साधारण शिक्षा साक्षर उत्पादन गर्ने अर्थात् शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र भयो । त्यसकारण यस मावि तुलसीपुर सेन्टरमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छौँ ।
प्राविधिक शिक्षा गरी खाने शिक्षा हो । यसले काम गर्ने संस्कृतिको विकास गराउँदछ । शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदछ । स्वरोजगारयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्छ ।
त्यसकारण मावि तुलसीपुर सेन्टरमा सूचना प्रविधि इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा सवओभरसियर तथा ओभरसियर तहको पढाइ सञ्चालन भएको छ । कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रिकल विषयमा तह एकको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
यसै शैक्षिक सत्रदेखि सूचना प्रविधि र इलेक्ट्रिकलमा TSLC तहको निशुल्क कार्यक्रम आउदैछ । यस विद्यालयलाई इन्जिनियरिङको हबको रुपमा विकास गर्ने र साधारण शिक्षासमेतलाई व्यवस्थित शिक्षणको माध्यमबाट उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ ।
अन्य विद्यालय छोडेर यही विद्यालयमा विद्यार्थीहरु पढन् आउनुको कारण के ? कि विभिन्न सेवा सुविधाका शीर्षकमा आश्वासन दिने गर्नुभएको छ र ?
हामीले भर्ना अभियानको क्रममा सामान्य सूचना मात्र ग¥यौँ । अस्वभाविक आश्वासन बाँड्नु आवश्यक नै छैन । सामुदायिक विद्यालयमा नाफा कमाउने होइन किन अस्वस्थ गतिविधि गर्नु ।
सेन्टर माविमा बैशाख २ देखि भर्ना शुरु भएको १५ गतेसम्म प्रायः सबै कक्षाहरुमा विद्यार्थी पूरा भइसकेको छ । प्रवेश परीक्षाको माध्यमबाट भर्ना गरिएको छ । अभिभावकहरु धेरै भर्ना नपाएर फर्कनुभएको छ । हामीसँग कक्षाकोठाको नपुग भएका कारण विद्यार्थी भर्ना रोक्नुपरेको छ ।
हाम्रो मावि सेन्टरमा अभिभावकहरुले विश्वास गर्नुका कारणहरु
– बालमैत्री पूर्वाधारहरुको राम्रो व्यवस्था भएको ।
– विभिन्न विषयमा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर छ ।
– गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत गरिएको छ । शैक्षिक सत्र २०७४ को SEE को रिजल्टमा तुलसीपुरकै उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको छ ।
– ‘शिक्षण प्रयोगात्मक शिक्षा व्यवहारिक’ भन्ने मूलमर्मका साथ विषयगत प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, ड्रोइङ ल्याव, मेकानिकल ल्याव, इलेक्ट्रिकल ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि व्यवस्था र शिक्षणमा यसको प्रयोग गरिएको छ ।
– शिक्षणमा ICT को प्रयोगलाई जोड दिइएको छ ।
– विद्यालयमा सबै कक्षाकोठामा CCTV क्यामेरा जडान गरिएको छ । अभिभावकले घरैबाट मोवाइल एप्सको माध्यमबाट विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– सबै विद्यार्थीको लागि RO पानीको प्लान्ट जडान गरिएको छ ।
– खेलकुद प्रशिक्षक, अनुशासन प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ ।
– यस वर्षदेखि संगीत कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
शैक्षिक अभियानमा तपाईको विद्यालय र अन्य विद्यालयमा के फरक छ ?
शैक्षिक अभियानमा अन्य विद्यालयको बारेमा तपाईंहरु नै जानकार हुनुहुन्छ । हामी अरु विद्यालयको भन्दा पनि आफ्नो कुरा गर्छौ । हामीले राम्रो गरेका छौँ भन्नेमा सन्तुष्ट छौं ।
हामीले निःशुल्क एवं सर्वसुलभ रुपमा विभिन्न प्राविधिक तथा साधारण विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छौँ । समाजमा बेरोजगार युवाहरुलाई निःशुल्क सिप तालिम प्रदान गरेका छौँ । शैक्षिक अभियानमा हामी तुलनात्मक रुपमा नै अगाडि छौँ ।
अहिले विद्यार्थीमा व्यवहारिक संस्कार हटेर जान थालेको छ ? यसको संरक्षणमा तपाईको विद्यालयको भूमिका के ?
वास्तवमा वर्तमान शिक्षाको प्रमुख सम्स्या भनेको नै शिक्षण प्रयोगात्मक नहुनु र शिक्षा व्यवहारिक नहुनु हो । शिक्षा व्यवहारिक नहुँदा र शिक्षण प्रयोगात्मक नहुँदा विद्यार्थीमा पढ्ने रुची नहुने र सिपको विकास अत्यन्त न्यून हुने गरेको छ । अझ लेखेर रटाउने प्रवृत्तिले बच्चाहरुको सिर्जनात्मक क्षमता नष्ट भएको छ ।
त्यसकारण मावि सेन्टरमा पाठ्यक्रम अनुसार व्यवहारिक पक्षलाई जोडेर शिक्षण गरिन्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीमा व्यवहारिक ज्ञानको विकास हुन्छ । सामाजिकरणमा विकास हुन्छ । साथसाथै हामीले नैतिक मूल्य मान्यतालाई पनि पाठ्यक्रम सँगसँगै जोडेर पढाउने व्यवस्था गरेका छौँ ।
शैक्षिक बजारमा विद्यालय–विद्यालयबीच व्यापक प्रतिस्पर्धा छ, तपाईले आफ्नो विद्यालयले कसरी प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु भएको छ ?
हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धाले नै कुनै पनि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो ।
तर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गुणस्तरमा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा सुविधामा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा अवसर दिलाउनमा हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनमा हुनुपर्दछ । हामी गुणस्तर सुविधा, अवसर र व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ ।
विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गराउनु भएको छ ?
शिक्षणमा पाठ्यक्रम प्रमुख हुन्छ । पाठ्यपुस्तक सहायक हुन्छ । पाठ्यक्रमले प्रदान गर्न खोजेको ज्ञान, सिप र व्यवहार पाठ्यपुस्तक वा अन्य पुस्तक तथा इन्टरनेटका सामाग्रीहरुको अध्ययनबाट पनि प्रदान गर्न सकिन्छ । हाम्रो विद्यालयमा यिनै विधिहरु अपनाई शिक्षण गरिन्छ ।
विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुग्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरु विद्यालयबाट खुशी छन् त ?
हामीलाई विश्वास छ, मावि सेन्टरको सेवाप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यसकारण यस विद्यालयमा विद्यार्थीको तिव्र चाप छ । हामी खोजेर होइन रोजेर भर्ना गरिरहेका छाँै ।
विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थी समाजमा टिक्न र बिक्न सक्ने भएका छन् त ? कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?
सेन्टर माविमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु हरेक क्षेत्रमा राम्रो गरेका छन् । समाजमा स्थापित छन् । अवसर प्राप्त गरेका छन् । प्राविधिकतर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु खाली समयमा प्राविधिक काम गरेर राम्रो आयआर्जन गर्न थालिसकेका छन् ।
पढाइपश्चात् रोजगारी वा स्वरोजगारी सुनिश्चित छ । किनकी उनीहरुसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान, सिप छ । उनीहरुमा गरिखाने संस्कृति निर्माण भएको छ ।
अहिले विद्यालयहरुमा विकृति बढ्दै गएको छ ? यसका तपाईको भनाइ के छ ?
विद्यालयमा विकृतिहरु बढ्दै जानु प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । टिचरलाई नटेर्ने,कुलतमा फस्ने, पढ्ने बानी नगर्ने, लडाइ–झगडा गर्ने, आवारा आचरण एवं पहिरन गर्ने अभिभावकलाई नटेर्ने ।
यो समस्या समाधान गर्न हामीले विद्यालयमा नै बाल क्लव गठन गरेका छौँ । उनीहरु आफै नियम, आचारसंहिता वनाइ लागू गर्छन् । स्कुलको आचारसंहिता छ ।
त्यसलाई कडाइ रुपमा कार्यान्वयन गर्न अनुशासन प्रशिक्षकको छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ । विद्यालयमा केटाहरुले आवारा पहिरन गर्न, केटीहरु श्रृङ्गार गर्न पूर्ण निषेध छ । हाल मावि सेन्टरमा खराब आचरण लगभग अन्त्य भइसकेको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई प्रविधियुक्त शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालयमा के कस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ ?
आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । प्रविधि र विज्ञानको विकासले मात्र तिव्र विकास सम्भव छ । त्यसकारण शिक्षणलाई प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाउन विद्यालयमा शिक्षणमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका छौँ ।
व्यवस्थित इन्टरनेट सुविधासहित कम्प्युटर ल्याव, ई–लाइब्रेरीको प्रवन्ध, व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्टवोर्ड, प्रोजेक्टरको माध्यमबाट शिक्षण लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि यो विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दै आएको, यहाँसम्म आइपुग्दा विद्यालय सञ्चालनमा आउने कठिनाईलाई कसरी सुल्झ्याउँदै लैजानुभएको छ ?
हरेक क्षेत्रमा चुनौतिहरु आउँछन, कठिनाइहरु हुन्छन्, द्वन्द्व हुन्छ । ति सबै कुराको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । विद्यालय सार्वजनिक निकाय हो ।
विद्यालयको सबै कुरा चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ र निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबै सरोकारवालालाई सहभागी बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने समस्याहरु समाधान हुँदै जान्छन् । हामी यसरी नै अगाडि बढेका छौ ।
अन्त्यमा छुटेको केही छ ?
मावि सेन्टरमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभिभावकहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुले विद्यालयलाई अपार विश्वास र सहयोग गर्नुभएको छ । साथै छोटो अवधिमा तिव्र सुधार हुन सफल यस विद्यालयलाई सहयोग पु¥याउने सरकारी निकाय,
गैर सरकारी निकाय तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामी तपाईंहरुको विश्वास र लगानीको उचित प्रतिफल दिन मन बचन र कर्मले समर्पित भएर लागेका छौँ । धन्यवाद !